Qwalasela i-smartwatch yaseTshayina ukulungisa ingxaki ngezaziso | I-Androidsis
UEder Ferreño | | IsiTshayina Android, SmartWatch, Tutorials
Ukuba kwiiyure nje ezimbalwa ezidlulileyo ndikunike uHlaziyo lwe-Iradish X9 Y6, njenge I-Apple Watch clone iyahambelana ne-Android kunye ne-iOS kwaye singafumana imali engaphantsi kwama-30 eeyuro, ngoku lithuba lokulungiswa kungqamaniso lwezaziso, ke ndiza kukubonisa indlela phelisa ingxaki yezaziso kwi IsiTshayina Smartwatches exhomekeke kwi-Bluetooth Notifier app.
Esi sisombululo kwingxaki yezaziso kwii-Smartwatches zaseTshayina ezibonakala kuthi zinekhonkco nee-smartphones ezinenguqulo ye-Android Lollipop, isebenze kuzo zonke iimodeli zamaTshayina eSwatchwatch kunye neempawu ezisebenzisa i-Bluetooth Notifier application, enika iingxaki ezininzi kakhulu kangangokuba ayingqamanisi nezaziso ezifunyenweyo.
1 Uyiseta njani i-smartwatch yaseTshayina kwaye ulungise ingxaki yezaziso
2 Uyicwangcisa njani i-smartwatch yaseTshayina
3 Uyidibanisa njani i-smartwatch yaseTshayina kwi-Android
4 Ii -apps ezibaluleke kakhulu zaseTshayina
5 Isazisi seBT
Uyiseta njani i-smartwatch yaseTshayina kwaye ulungise ingxaki yezaziso
Kwividiyo eqhotyoshelwe kwintloko yeli nqaku ndikubonisa inyathelo ngenyathelo isisombululo kwingxaki yezaziso kwii-Smartwatches zaseTshayina. Isisombululo esilula njenge ukukhipha isaziso seBluetooth kunye nokufaka ii-Smartwear, esinye sezicelo zeTshayina i-Smartwatch efumaneka simahla kwiVenkile yeGoogle Play ngokucofa kwikhonkco endilishiya ngezantsi.
Ngofakelo olulula lweempahla zekhompyutha kunye nokungafakwa kweBluetooth Isazisi siya kulungiswa Zonke iingxaki zokuvumelanisa isaziso Kuzo zonke iimveliso kunye neemodeli zewotsch zaseTshayina ezisebenzise iBluetooth yesazisi.
Eyona ndlela ibalaseleyo yamaTshayina
Smartwear Sesinye sezona zicelo zilula zewatchwatch yaseTshayina ukuyisebenzisa kunye nokuqwalaselwa, ngokulula okanye ngaphezulu kwesazisi seBluetooth Esiza kuthi ngayo sifezekise ukungqinelanisa zonke izaziso ezifikelela kuthi kwi-Smartphone edityaniswe kwi-Smartwatch, nangona sisuka kwiseto sesicelo, siya kuba nakho ukucoca izaziso ngezicelo ukuze sifumane kuphela izaziso izicelo ezinomdla kuthi.
Nangona kwezi zikrini ezivela kwiGoogle Play Store, uyabona ukuba isicelo sibonakala ngesiTshayina, inyaniso kukuba Iguqulelwe ngokupheleleyo kwisiNgesi kwaye isebenza ngokupheleleyo kwaye kulula kakhulu ukuyiqonda.
Uyicwangcisa njani i-smartwatch yaseTshayina
Xa uthenga i-cino smartwatch, enye yeenkcukacha zokuqala Kuya kufuneka sithathele ingqalelo inkqubo oyisebenzisayo. Kwiimeko ezininzi, iimveliso zibheja kwi-Wear OS, inkqubo yokusebenza ephuhliswe nguGoogle kwezi zixhobo. Ukuba kunjalo, inkqubo ilula ngokwenyani, kuba ubumbeko aluyi kusithatha ixesha elide. Ukwenza oku, kuya kufuneka sisebenzise usetyenziso lwe-Android Wear kwifowuni.
Nje ukuba usetyenziso lukhutshwe, Kuya kufuneka sisebenzise iBluetooth kuzo zombini izixhobo nakwi-Wear OS app cofa kuQalo loqwalaselo. Emva koko kuya kufuneka silandele kuphela amanyathelo aboniswe kwiscreen, ukuze izixhobo zimbini zidibane. Umyalezo uza kuvela kwiscreen esithi sixhunyiwe okanye sixhunyiwe, ukuze sazi ukuba oku sele kwenzekile.
Nje ukuba uqhagamshele, Singayiqwalasela le smartwatch Ngendlela elula. Ukusuka kwisicelo se-Wear OS sinokukwenza ngaphandle kwengxaki ezininzi. Siza kwenza ngokwezifiso imisebenzi esifuna ukuyisebenzisa ekubukeni, ukuze ilingane
Uyidibanisa njani i-smartwatch yaseTshayina kwi-Android
Kwixesha elidlulileyo, kwisiganeko esathi i-Chinese smartwatch yayingenayo i-Android Wear okanye i-Wear OS, ezinye ii -apps kwakufuneka zisetyenziswe. Ngelishwa, uninzi lwazo lususiwe evenkileni, ezinje nge-Smart Wear okanye isixhobo seMediaTek. Inxalenye elungileyo kukuba kukho esinye isicelo esivumela ukuba siphumeze le nkqubo, ukudibanisa iwotshi kwifowuni ye-Android, ukongeza ekupheliseni iingxaki zesaziso.
Imalunga nokubukela iFowuni yeDroid, esele ikho i-Android okwexeshana. Esi sicelo sisinceda ukuba sidibanise iwatchwatch yakho kunye nenkqubo yokusebenza ye-Android kwifowuni ukuze ukwazi ukufumana izaziso ezivela kwizicelo zakho, ukulawula umculo, ukudlala iifayile kwifowuni ukuya kwi-smartwatch nezinye ezininzi. Ukwenza oku, kuya kufuneka sikhuphele usetyenziso lwewindows kunye nefowuni:
Bukela iFowuni yeDroid
Umthuthukisi: Isoftware yeLumatic
Bukela uMncedisi weDroid
Nje ukuba izicelo ezimbini zikhutshelwe, kufuneka sivule usetyenziso lwefowuni. Isibonisa amanyathelo ekufuneka siwalandele ukudibanisa ifowuni nale smartwatch yaseTshayina. Ke kumanyathelo ambalwa siza kuba sele sinazo ezi zixhobo zimbini zilungelelaniswe ngendlela elula, eya kusivumela ukuba silisebenzise kakuhle eli wotshi.
Ii -apps ezibaluleke kakhulu zaseTshayina
Zininzi iiapps ezinokuba luncedo kubasebenzisi abaneswatchwatch yaseTshayina, ukuze babe nakho ukufumana okuninzi kuyo. Ezinye zezonaapps zinomdla zezi:
Isicelo esigqibeleleyo kubasebenzisi abaphuma bayokubaleka. Kuba inikezelwa njenge-app yakho yokubaleka kunye neyokomelela komzimba, enkosi apho unerekhodi egqibeleleyo nelilawulwayo ngawo onke amaxesha okusebenza kwakho, nazo zonke iinkcukacha ezibaluleke kakhulu malunga noku. Ke unokuba nokulandela umkhondo womzimba olungileyo ngenxa yale app.
Uhlelo lokusebenza oluthandwayo oluzenzekelayo, esinceda ukuba siququzelele iinkqubo ezininzi emnxebeni okanye mihla le. Ukongeza, sinokuyisebenzisa ngewatchwatch, ukuze siyisebenzise nangakumbi ngalo lonke ixesha. Ke sisicelo esinokuba luncedo kubasebenzisi abaninzi.
Umthuthukisi: IFTTT, Inc.
Inkqubo yemiyalezo eyaziwayo iyavumelanisa kunye ne-smartwatch, ukuze sikwazi ukubona yonke imiyalezo esiyifumana ekubukeni nanini na. Ke, awusoze uphoswe nasiphi na isaziso kuyo, ngakumbi ukuba uphume waya kwenza ezemidlalo nangaliphi na ixesha.
Esi sicelo yinto eqhelekileyo kwii-smartwatches zaseTshayina, kodwa kwiimeko ezininzi kunokubangela iingxaki, njengezaziso. Ke ngoko, ingcebiso kukususa ekubukeni. Ngokukodwa kuba endaweni yoko sinokusebenzisa ezinye iinkqubo eziza kusebenza ngcono, ezinjenge-Droid Watch, ezisinika imisebenzi efanayo, ukongeza kwimisebenzi eyongezelelweyo, engazukubangela iingxaki ekusebenzeni kwewotshi.
Okwangoku Ungalanda iBluetooth Isazisi kuGoogle Play, apho isafumaneka khona. Nangona iireyithingi zomsebenzisi zingalunganga, oko kuyenza icace into yokuba sisixhobo esingaqinisekisiyo kwaye sinike ukusebenza okulindelekileyo. Kungcono ukunqande ukuyisebenzisa kwi-smartwatch yakho yaseTshayina.
Siyathemba ukuba emva kwesi sifundo sincinci ukwazile setha iwatchwatch yesiTshayina kwaye iingxaki zezaziso zilungisiwe. Ukuba ufumene enye indlela yokulungisa le bug ikhathazayo, masixelele ukuba uyenze njani kumagqabaza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » IsiTshayina Android » Uyilungisa njani ingxaki yezaziso kwii-Smartwatches zaseTshayina
Izimvo ezi-77, shiya ezakho
Uyinto entle !!! Le app ilungile !!
Enkoso ngokwabelana ??
Ndiyifakile inkosi kwaye inyani kukuba kuphela kwento endifumene ngayo isaziso, kodwa ingxaki kukuba ndifumana kuphela izaziso ezivela kwifowuni, akukho saziso sivela kusetyenziso oluqwalaselweyo kwaye ndizamile yonke into, andiyenzi Andazi ukuba ungayenza njani. ulwazi oluthile?
Unayiphi ifowuni? Kwenzeka into efanayo kum ngemoto g 2014
Ii-encinas zikaRoberto sitsho
Mhlobo ndinengxaki iapp ayiyiboni iwotshi: / ndingenza ntoni
Phendula URoberto Encinas
Ndine-KSIX Smart Watch, ndiyidibanisa ne-bluetooh, isebenza imizuzu emihlanu yokuqala kwaye iwotshi ye-BT ilahlekile, iselfowuni yam yimodeli ye-Samsung GALAXY Ace GT558391 Android version 2.3.6.
Ndithenge i-smartwatch yaseTshayina, yadibanisa iBluetooth ye-LG Cel yam egqibeleleyo kodwa ayizidibananga nayo. Ndifunde phantse zonke iingcebiso eziphume malunga nayo, bendisebenzisa phantse zonke iiapps kwaye akukho nto.
Xa ndikhangela iisethingi zeseli yam, bendicimiwe "indawo". Ndayilayita ndayisombulula ingxaki. Baye banxulunyaniswa kwangoko kwaye basebenzisa kuphela usetyenziso olucebiswe ngumenzi wewotshi.
Ndiyathemba ukuba amava am azokusebenzela.
Molo, ndonwabile kakhulu ukuhlangana kundincedile kakhulu kodwa ndingathanda ukutshintsha ubuso bewotshi yam yaseTshayina, imodeli nguW3, ngaba kunokwenzeka, ungandinceda? Enkosi, ndiza kulinda impendulo yakho
Phendula kwi pilo
Intale ndifumana ezimbalwa kwaye indiphosela impazamo okanye ikhuphe kuphela ikhompyuter yam s5
Amagama omnxeba we Heidy sitsho
Ndinewotshi ye-a8 kwaye okwangoku izaziso zilungile, ingxaki yam ifika xa isenziwa ngokwezifiso, kuba akukho ndlela yakubeka nantoni kwi-samrtwatch
Ayisebenzi kwi-smartwatch ye-GT08S ngefowuni ye-LG G3 ene-Android 5.0 lollipop.
Ndine-One Touch Pop C7 kwaye isebenza kakuhle kwiintsuku ezimbalwa kwaye iyeke ukusebenza iphinde ikhuphe unxibelelwano kwakhona.
UAbheli Sanabria sitsho
Mva kwemini, isebenza phakathi kunye ne-s5 yam, kwaye nge-lenovo A2010, idlala kuphela isandi kodwa ayibonisi nto
Phendula u-Abel Sanabria
Enkosi ngegalelo. Ayindivumeli ukufakelwa, indinika impazamo eyi-505 ukuba ayinakufakwa, ndingenza ntoni? Enkosi
Khipha enye usetyenziso onayo kwifowuni yakho eqhagamshelwe kwi-smartwatch kwaye ufake iSmartWear.
u8 nge-s7 usebenze ngokugqibeleleyo! Enkosi!
UArturo Xavier sitsho
Ndine-S7 kwaye andikwazi ukuyidibanisa, idibanisa kwaye inqamle kwakhona, ngaba umntu angandinceda?
Phendula kuArturo Xavier
Iwotshi enye yeTshayina kunye neTshayina nganye ngewotshi, bazifaka kuthi ziphindwe kabini
ingelosi aragon ortega sitsho
NdineGR08 kwaye izaziso azimiselwanga
Phendula kwingelosi aragon ortega
ULuis Barrios sitsho
Molo, ungandinceda, ndivela eVenezuela, ndinemodeli ye-U8 kwaye ndiyifaka kwithebhulethi ye-android okanye ezinye izixhobo ze-android kwaye usetyenziso lweSmartWear alunakukuqonda isixhobo se-U8. Ifowuni iqhagamshelwe ngeBluetooth kodwa kwi-app ndiyifumana ukuba ayitsho ukusilela "iSmartDevice qhagamshela ukusilela" Ndizamile zonke iiapps kwaye akhonto.
Imeyili yam: lualba.420@gmail.com
Phendula uLuis Barrios
UCarolina Soto Silva sitsho
Ndonwabile kuba isicelo sisebenza ngokugqwesileyo kum. KwiSony Xperia C4
Phendula uCarolina Soto Silva
Kulungile, andina-no1 g3 kunye nesicelo fundo, malunga nokufika kwezaziso andinangxaki. Ingxaki iza xa ndizama ukuzifunda kwi-smartwatch kwaye andazi ukuba ndibuza kakhulu, kodwa ndizifundile izimvo ezithi ungafunda ii-whatsap nezinye. Inyani yile yokuba ndiyabona ukuba zeziphi izaziso endinazo, kodwa ayindivumeli ukuba ndifunde imiyalezo ngokwabo. Nabani na onokundifunela intambo?
Molo Josemi. Ndinengxaki efanayo kwiwatchwatch efanayo. Ndiyabona umzekelo ukuba ndinemiyalezo esi-7 kuWhatsApp evela kwincoko ezi-3 ezahlukeneyo. I-SUV nangona kunjalo andikwazi kufunda enye yazo.
Ngaba ukwazile ukuyilungisa?
Kwenzeka into efanayo nakum, sisaziso nje kwaye andinakukwazi ukuzifunda. Ndifunde kwiphepha ezinye iiwotshi ezingasetyenziswanga ukufundelwa ukwazisa 🙁
I-APP ayisasebenzi 🙁
Molo, enkosi kakhulu ngolwazi, kodwa ividiyo ayifumaneki. 🙁
Molo Luis. Ndinengxaki efanayo ngqo kwiwatchwatch efanayo. Ngaba ukwazile ukuyisombulula? Ndiyabona ukuba ndinomzekelo wemiyalezo esi-7 evela kwincoko ezi-3, kodwa andikwazi kufunda nokuba inye ...
Ngaba ikhona inguqulelo ye-smartwear App ye-iPhone?
Ndiyifumana njani i-whatsapp kwi-GTO8 ene-iPhone?
I-Deiby Cobo sitsho
Molo mhlobo, ndibone umbuzo wakho malunga nokuba ikhona na i-app yokuqhagamshela i-GT08 kwi-iPhone, nam andithandabuzi ukuba uyazi ukuba ndiyabulela
Phendula kuDeiby Cobo
Molo, molweni emva kwemini, ndinxibe i-kingwear kw18 kwaye ndingathanda ukongeza ubuso bewotshi.Ndicela undincede?
Molo, ndine-iPhone 6s, zeziphi iiapps endizisebenzisayo?
UJose Ricardo sitsho
Mholo..! Enkosi ngengcaciso yakho. Andithandabuzi. Kwifowuni nakwilindi zombini zibonakala zixhunyiwe, nangona kunjalo usetyenziso alunakufumana iwotshi. Yi-U8.
Ndingathanda impendulo eluncedo ukuba kunokwenzeka. Enkosi
Phendula kuJosé Ricardo
Mholo. Cela uxolo xa umbuzo ungabuzwanga kwindawo echanekileyo (kodwa andazi ukuba ndiza kuwubeka phi) Ndithenge iwotshi yamawotshi yamaTshayina kwintombi yam kwaye kuvela ukuba ayinayo iSpanish, inokwenzeka yongeza ngandlela thile. Enkosi .
UAndrea intamo sitsho
Molweni ndine A1 kwaye kufika isandi sika whatsapp qha not umyalezo, ndifuna isisombululo
Phendula Cuello andrea
ILois david sitsho
Into efanayo eyenzekayo kum Andrea, uyisombulule, undazise?
Phendula uLois David
Guillermo Santiago sitsho
I-smartwash yam ayisiyala maxesha kwaye xa ndikhangela ikhowudi ye-qr iyandithumela ukuba ndiyodlala kwivenkile kodwa ayizukundivumela ndikhuphele eyokuqala bt notifier. Ungandinceda ndibone ukuba uyandivumela ukuba ndiqwalasele? Enkosi kakhulu kwangaphambili.
Phendula uGuillermo Santiago
UAndrea Neck sitsho
Molo, khange ndiyisombulule, imeyile yam yile andrea_itaty @ hotmail. com, Ndifuna uncedo
Phendula ku-Andrea Cuello
molo ndifuna uncedo, ndine-sony smartwatch 3 kwaye kwezinye iiapps indinika impazamo yokuhamba ngexesha elinye kuwotshi nceda uncede
Molo, andazi nokuba izakuba yindawo elungileyo yokwenza lo mbuzo.Ndithengele intombi yam i-smartwach yamaTshayina kwaye ayizisi ulwimi lwaseSpanish. Ngaba kuya kubakho ukubanakho ukongeza? Ndiyathemba ukuba ungandinceda. Enkosi.
Ndinombuzo, ndine-j7 kwaye ndine-gt08 smartwatch kwaye andikwazi ukufunda izaziso ze-whatsapp, nangona kunjalo ukuba ndingazifunda ezi ziza kum kwi-facebook messenger, ngaba sikhona isisombululo? Ndinesicelo esifakelwe esize nekhowudi ye-qr ekubukweni
Ndisenamathandabuzo kaNombolo 1 G3 kunye noWhatsapp ngokwahlukeneyo
Ndibona kuphela isaziso sokuba ndinemiyalezo kuWhatsapp kodwa andikwazi ukuyifunda. Nasiphi na isisombululo?
Uyayazi i-KW88 Smartwatch, ungandixelela ukuba ilungile na njengoko ipeyintwe kwintengiso yemveliso.
USebastian Andres Galaz Ponce sitsho
Molweni kwiintsuku ezi-2 ezidlulileyo ndithenge i-U8 smartwatch kwaye ndinengxaki yokuba izaziso zize kum kwaye ndingazifunda kodwa iwotshi ayikhali okanye idlidlithe xa ifika kwaye andazi ukuba ndenze ntoni ukuba banokunceda me, imeyile yam yile sebastian.galaz93@gmail.com
Phendula uSebastian Andres Galaz Ponce
Molo, ndathenga i-dz09 kodwa ayizukundivumela ndifakele u-whatsapp okanye u-facebook, kwaye nesikhangeli asinayo, sele inayo i-chip ukuze isebenze ngokukodwa kwiselfowuni, kodwa iyandithumela kwisikhangeli ukuyifaka kodwa inika Impazamo, ngaba umntu othile angandinceda?
Molo, mva kwemini, nceda undincede? Ndine-iPhone kwaye iwotshi ye-dz09 isebenza kuphela kwiminxeba, kwaye umyalezo uyafika, kodwa akukho saziso sinokubonwa, kwaye ndifundile kumacala ahlukeneyo ukuba ukuba bangakwazi, ubuncinci bafunde umyalezo obhaliweyo kunye ne-Whats App, ndiyathemba uncedo, enkosi imibuliso
Andifumani zaziso nantoni na. Iifowuni ziyafikelela kum kodwa iiwhatsapp azinazo. Sele ndizamile eso sicelo kwaye uninzi alusebenzi. Inika umqondiso wokuba idityanisiwe kodwa ii-whatsapp azifiki:
Ndine-gt08 kwaye iifowuni ziyafika kodwa izaziso aziyonto okanye wahtsapp okanye nantoni na. Sele ndiyizamile le app kunye nezinye ezininzi, kodwa akukho nanye esebenzayo kum, sendibonile uninzi lwezifundo, ndenze yonke into kunye nezaziso ngaphandle kokufika.Ndicela uncede. Enkosi.
Zama iMediatek SmartDevice. Ndenza kakuhle.
Ndithenge iwotshi efanelekileyo kwaye andikwazi kufunda imiyalezo yakhe nawuphi na umalume isiTshayina. Ndikubulela kanjani. NDIDINGA UNCEDO
NDIYASHIYA IMEYILE YAM KUWE.
Ndinewotshi, no.1 g6 kwaye andikwazi ukudibanisa iwotshi kunye neselfowuni, kwaye ndinemoto g4 dibanisa
U-Anthony M Benavides L sitsho
Ndifuna umntu oza kundifundisa ngewotshi ye-kw88 ndicela undincedise nge-imeyile yam dranthonymbl@gmail.com
Phendula ku-Anthony M Benavides L
Mholo. Ndine-gt08 kunye ne-Android 6.0.1 endiyifakileyo phantse yonke i-apk kwaye ayisebenzi. Ngamanye amaxesha iyandazisa kodwa ayindivumeli ukuba ndifunde iwhatsapp. Nceda sibulele
Molo, ndine-k88h kwaye emva kweentsuku ezimbini ezigqibeleleyo ... xa ndiyivula, usuku lwesithathu luhlala kwiscreen sokudibanisa. Kwaye kude kube namhlanje ... ngaba ikhe yenzeka komnye umntu? ... uyazi ukuba ungayiseta njani kwakhona. ..inokuhlanjwa kwewotshi kuphela okwenza ...
Ndinayo efanayo kwaye kwenzeka into efanayo kum
UMNTU ANGANXIBELELA ne-iphone ????
I-dz09 yam ayizisi kutshintsha ulwimi ukusuka kwisiNgesi ukuya kwiSpanish, ndenza ntoni
naluphi na usetyenziso lwe-smart jj ehambelana ne-Android 7.0?
Phendula u cleo
Isithsaba sikaCarlos sitsho
NdineSmart Watch q18 kodwa ikhamera ibonisa umfanekiso ujonge ezantsi. Andazi ukuba ingaxazululwa njani?
Phendula uCarlos corona
isandla sasekhohlo sitsho
Ndithenge i-Smartwartch, kwaye ndibeke i-BTNotification kuyo kwaye isebenza kakuhle kum. Andazi ukuba ngubani ophethe eli phepha, ndiqinisekile ukuba abanamdla, ndizibonile izimvo kwaye aziphendulanga enye. Kutheni usenza ezi zinto, ungancedi, Ungayenza ngemali? IMediaTek nayo iyasebenza, kodwa eWsap ubona kuphela isaziso se-msg, hayi isicatshulwa, yinto eqhelekileyo leyo. Imibuzo… .. unayo ndikwazile ukwenza i-intanethi isebenze. Thumela abafowunelwa ngaphandle kule wotshi, kwaye ubasebenzise nefowuni enqanyuliweyo kwi-BT?. Nayiphi na imibuzo, ndiza kuyiphendula. Enkosi.
molo ndizamile ukufaka iiapps ezininzi kunye nabafowunelwa, iifowuni kunye nezaziso zilungile kodwa andiyiboni imiyalezo evela kwi-wassap. Ungandinceda. NdineBt2 U8
i juanma sitsho
Ndithengile iwotshi smart n smart1 S9 kodwa nge-motorola yam G3 Android 6 izaziso azisebenzi. Ndizamile nge-samsung ene-Android v. 4.2 kwaye ewe iyasebenza.
Ngaba loo nto yenzeke komnye umntu? ndingazi phi ngaphezulu….
IiHols ndingathanda ukwazi ukuba ndiyibona njani i-wasap kwi-smartwach ene-SIM. NgeBluetooth ndingayenza kodwa hayi ngeSIM khadi. NgamaTshayina ... i-DAM G3. Enkosi
Ndikwazile ukumisela iwatchwatch yam yaseTshayina emva kokuphonononga amaphepha angama-200 kwaye akukho namnye kubo oya kundisebenzela. Ndifikelele nje kuseto lokhetho-> Isaziso se-BT -> google play ukusuka ekubukeni. Ukusuka apho, ikhowudi yeQR yavela kwiscreen sewotshi kwaye ndayihlola ngekhowudi yeQR yesicelo endikhuphele kuyo kumdlalo kaGoogle. Ngokwenza njalo, ndizithumela ngqo kwidilesi yokudlala kaGoogle yeSaziso seBT, eluhlobo olwenziweyo ukuba iwotshi isebenze nge-100%. ilunge kakhulu. Ndiyathemba ukuba iyanceda.
ps: iselfowuni yam yimodeli ye-LG Bello kabini chip 2015 u = kwaye iwatchwatch ayindixeleli nayiphi na ikhowudi okanye nantoni na. Ke andiyazi inguqulelo okanye imodeli yakho: V
Ayisebenzi kum ngayo nayiphi na iapp, iwotshi yi-lemfo lf1 kwaye iselfowuni yi-oneplus3.
UErick vazquez sitsho
Uxolo bendifunda amagqabantshintshi kwaye ndinengxaki efanayo, ndinayo i-u8 smartwatch kunye neMoto G4 ene-android 7.0 kwaye ndingayidibanisa ngebluetooth, kodwa sele ndizamile zonke izicelo ezivela kwisaziso se-Bt (kuzo zonke iinguqulelo zayo), Ukubukela okuSmart, uMncedisi weWatch Smart, iMediatek SmartDevice, Smart Wear. Ezo zezicelo endizamile kwaye akukho nto, zonke, ndifumana impazamo, ezinye zezicelo zinxibelelene kodwa xa kufika isaziso kwiselfowuni, isicelo siphawula impazamo kwaye sivale ngokungalindelekanga.
Ngoku qhagamshela iSmart Watch kunye nenye iselfowuni kunye ne-Android 5.0 lollipop kunye ne-app yeBt yesaziso (leyo iwotshi ebuzwa yi-smart) kwaye iqhagamshele ngokugqibeleleyo ………
Phendula kuErick Vazquez
D. Mérida sitsho
Mvakwemini emnandi uFrancisco, ndathenga iKingwear kw88 kwaye ndinengxaki zokudibanisa iwotshi yam nenqaku lomnyele wam we-Samsung. Ndizilandile izifundo zakho zevidiyo, kodwa andikwazi ukuzidibanisa nesicelo se-Android sokunxiba esingayiboni iwotshi yam ifakiwe Ngewotshi yam yakudala, i-smartwatch 4 yakwaSony, isicelo se-Android sokunxiba kwaye ndiyayazi, kwaye andinakho ukuba i-kw3 ivele kwinqaku lam ukuze ndiyidibanise. Ngaba unayo enye indlela yokuyiqhagamshela?
Enkosi kakhulu kunye nemibuliso, ndingumlandeli wakho kwisitishi sakho seYouTube.
Phendula u-D. Mérida
Molo, ndivela ePanama, ndiyekile iphepha lakho elihle, ndinengxaki kwaye ndifuna ukwazi ukuba ungandinceda na ndinomlindo we-manbo 2 kwinkampani ye-lifeesense kodwa ndiyithengile e-China ngoku ndinengxaki insiza kwaye andinakufumana enye ehambelanayo, kwaye ndikhuphele le nto inikwa yinkampani kwaye akukho nto unokundinceda yona enkosi
UJoseph silva sitsho
Ayindivumeli ukuba ndikhuphele usetyenziso kwaye ndidlulise ikhowudi, iyandixelela, kwaye ayifumaneki into leyo
Phendula uJoseph silva
Ndine-smartwatch dz09 kutshanje ndibeke ikhadi leselula kwaye andifumani intanethi ukukhuphela i-whatsapp, facebook ne-twitter
Molo, ndithenge i-DZ09 kwaye ndizamile zonke izicelo endizaziyo ukuba ndikwazi ukufunda umbhalo wewhatsapp kuba indilumkisa ngesaziso kwaye ngubani osithumelayo kodwa umbhalo awunanto. Ndiyaqonda ukuba kweso smartwatch Ewe ungasibona isicatshulwa sezaziso, enyanisweni ezinye. Ividiyo ndiyibonile. Kwi-oneplus yam enye ndinombhalo os wenguqulo ye-Android efakiweyo. Ndingathanda ukwazi ukuba ngaba sikhona isisombululo sokusombulula ingxaki. Enkosi
Amagumbi kaRebecca sitsho
Molo, ngethemba ungandinceda, ndinewotshi ye-dz09 kunye neMoto g5plus, ndikhuphele isicelo kwaye yonke into ibilungile kodwa xa izicelo zifakiwe (usetyenziso endinalo efowunini sele luvele ukuze isaziso sikwazi ukufikelela kum ), iwotshi ibonakala ngokungacinywanga, oko kukuthi, idityaniswe yiBluetooth kwaye kuseto lwefowuni iyavela kodwa hayi kwi-app, ndingayisombulula njani?
Ndinengxaki nge-U8, xa nditshintsha ulwimi ukuya eSpanish usuku lomhla luhlala lubonakala ngoMvulo, iintsuku zihamba kwaye inani lomhla lilungile kodwa usuku lungoMvulo, ngesiNgesi umhla usebenza ngokugqibeleleyo yam kwaye ukuba utshintsho. NCEDA !!!!!!!
Umbuzo wam kukuba ndivuselela izaziso kodwa ukuba ndivuselela iminxeba, ndingazithatha ngewotshi, hayi emnxebeni ...
Ndine-dz09 kodwa iyabambeka kakhulu kwaye kufuneka ndiyisuse ibhetri ukuze iphinde iqale, into endiyiqaphelayo kukuba ibhetri inomoya kwaye inonxibelelwano olungelulo.
Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba isitaki siyiphembelela ukuba siwe?
Andazi ukuba umntu angandinceda nge-p70 smartwatch yam, ndiqhele ukusebenzisa i-WHATSAPP PLUS kwimixholo kunye nayo yonke loo nto, kodwa iwotshi yam ayiyifumani imiyalezo ene-whats, kufuneka ibe yi-Original WhatsApp ukwazi ukufumana izaziso.
Ngaba ukhona umntu owaziyo ngeapp okanye into ethile yokundivumela ndifumane i-whats nge-WHATSAPP PLUS?
IMoto Z4 isemthethweni ngeSpapdragon 675 kunye nescreen seOLED esingu-6,4